Microsoft dia manohy mandroaka ny mpiasany, anjaran'ny mpiasa Skype izao | Vaovao momba ny gadget
Araka ny voalaza ny fotoana ara-bola, Hanomboka dingan-tsofina i Microsoft aorian'izay hanidy ny biraon'ny London izay misy ny fizarana Skype any. Tafiditra amin'izany dingana izany olona maherin'ny 400, olo-malaza ambony na dia tsy avo noho ny fananganana farany ny orinasa izay midika hoe manala saika ny mpiasa rehetra azony tamin'ny Nokia.
Amin'ity tranga ity, Ny fanidiana ny birao any Londres dia tsy midika hoe manala Skype, Nanamafy izany i Microsoft, na dia mampitandrina aza izy fa nanomboka ny dingana iray hampitambatra ny asan'ny injeniera izay ananany amin'izao fotoana izao mba hampihenana ny mpiasa.
Hanohy amin'ny biraon'ny Skype sy ny toerany sisa i Microsoft fa kosa ny any London dia tsy hanao izany
Na dia ity aza ny kinova ofisialy, maro ny vaovao voangona avy amin'ireo mpiasan'ny orinasa taloha izay nifandray tamin'ny Skype ary nampitandrina fa hatramin'ny fividianana dia nihena tsikelikely i Microsoft ary manolo ireo mpiasa Skype taloha amin'ny mpiasan'ny Microsoft, zavatra izay tsy mitsahatra ny mahazatra ao anatin'ireny toe-javatra ireny na dia samy milaza zavatra hafa foana aza ny roa tonta. Ka i Microsoft tsikelikely dia hanafoana ireo mpiasa Skype tany am-boalohany fa koa amin'ireo orinasa hafa izay novidiny tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Na izany na tsy izany, mieritreritra manokana aho Microsoft dia manohy ny paikadiny mampihena, amin'ny teny hafa, aheno ny mpiasa mba hahomby kokoa manoloana ny fanovana ho avy. Ireo drafitra ireo dia tsy mahazatra an'ny Microsoft fa ny orinasa lehibe hafa dia manao toy izany koa amin'ny maodelin'izy ireo toa ny Intel. Na izany na tsy izany, ny hoavin'ny biraon'i Skype any London dia voaisy tombo-kase ary miaraka aminy ny ho avin'ireo mpiasa ao amin'ilay orinasa. SAINGY Tena ho fandroahana farany amin'ny orinasa ve izy ireo amin'ity taona ity? Mbola hisy tsy ampoizina hafa ve ao amin'i Microsoft? Misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny Skype ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Tsy mitsahatra mandroaka ny mpiasa ao aminy i Microsoft, anjaran'ny mpiasa Skype izao
Perihelion dia hoy izy:
Ary tsy hifandray amin'izany ve ny Brexit? Kisendrasendra ny biraon'i Londres ihany no mikatona ...
Mamaly ny Perihelion